Indlu yakudala yaseSweden kufutshane nechibi laseBolmen
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJenny
Hlala kwimbali yaseSmåland, kwindlwana edibanisa umtsalane wakudala kunye nobutofotofo bale mihla. I-Västerdal yindlwana ebomvu ye-'falu' yaseSweden, esekwe kumhlaba wemithi ozolileyo onegadi enkulu kunye nembonakalo yeLake Bolmen entle. Yiza apha ukuze uphumle emlilweni weenkuni, okanye ujabulele imisebenzi emininzi yangaphandle ehlathini nasechibini.
Qubha kumanzi amahle eLake Bolmen, thatha uhambo ngesikhephe, okanye uhambe ehlathini. Ukuqesha isikhephe sasimahla kunye nezixhobo, kubandakanya iibhatyi zobomi kuzo zonke iisayizi, ziyafumaneka kwiindwendwe zethu. Ngobusuku obupholileyo okanye ebusika, faka iisokisi zakho ezifudumeleyo kunye ne-slippers, khanyisa umlilo weenkuni kwaye udibanise.
Imidlalo yangaphandle, iithoyi kunye neencwadi ziyafumaneka. Egadini ungakha isipha seentyatyambo zasendle, ube nebarbecue, udlale umdlalo we-croquet, okanye ufumane indawo oyithandayo yokuhlala kwaye uhlale phantsi ukuze ufunde.